Halyeey reer Argentina ah oo amaanay Ronaldo isla markana Messi ku tilmaamay xaasid – Gool FM
Halyeey reer Argentina ah oo amaanay Ronaldo isla markana Messi ku tilmaamay xaasid
(Yurub) 27 Maajo 2019. Halyeeyga reer Argentina ee Mario Kempes ayaan ka laba labeynin inuu dhaleeceeyo xiddiga ay isku wadanka yihiin ee Lionel Messi, kaasoo uu aaminsan yahay in qaab ciyaareedkiisa uu ku yimid isbadal xiliyadii dambe, marka loo fiiriyo sida uu ahaa xiliyadii hore.
Wargeyska “Express” ee dalka England ayaa sheegay in halyeeyga Mario Kempes uu tilmaamay in qaab ciyaareedkii hore ee Lionel Messi uu ahaa mid ku tiirsan kooxda isla markaana u ciyaari jiray qaab wada jir ah, balse haatan uu noqday mid xaasid ah isla markaana uu u ciyaaro naftiisa oo kaliya, marka loo fiiriyo ficiladiisa.
Dhinaca kale halyeeygan reer Argentina ee Mario Kempes ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu haatan ka duwan yahay Lionel Messi, maadaama uu xidiga reer Portugal uu u ciyaaro kana shaqeeyo danta kooxdiisa, in kabadan naftiisa.
“Hadii eynu nahay Argntina waxaan eedeeneynaa Messi, sababtoo ah waa mid naga tirsan anaga”.
“Waxaan aragnay Messi inuu ka sameynayo wax walba gudaha garoonka, laakiin hada waxaan isaga ahaan u arkaa inuu doonayo inuu wax badan sameeyo isaga kaligiis”.
“Marka Messi uu garoonka ku jiro, waa inaad diyaar u ahaataa sababtoo ah ma ogid xilliga uu ku dhibaateyn karo, Messi waa Messi, Messi waa Barcelona”.
Matthijs De Ligt oo ka yaabsaday kooxda Barcelona kaddib markii uu si cad u sheegay suurtagalinada uu…..
Maxay tahay abaal-marinta uu maanta ku guuleystay Eden Hazard?